Indlela Yokwazi UNkulunkulu Osemhlabeni | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Nonke niyakujabulela ukuthola umvuzo phambi kukaNkulunkulu nokuba ababekelwe umusa Wakhe emehlwenu Akhe. Lokhu kuyisifiso sawo wonke umuntu emuva kokuqala ukukholwa kuNkulunkulu, ngokuba umuntu ulwela izinto eziphezulu ngenhliziyo yakhe yonke futhi akekho ofisa ukuba semuva kwabanye. Lena indlela yomuntu. Ngenxa kanye yalesi sizathu, abaningi kini bahlala bezama ukuthola umusa kaNkulunkulu ezulwini, nokho empeleni, ukwethembeka nobuqotho kuNkulunkulu, kuncane kakhulu kunokwethembeka nobuqotho enikubhekise kini. Kungani ngisho lokhu? Ngenxa yokuthi angikwazisi nakancane ukwethembeka kwenu kuNkulunkulu, futhi ngiyakuphika ukuba khona kukaNkulunkulu okhona ezinhliziyweni zenu. Lokho kusho ukuthi, uNkulunkulu enimkhonzayo, lo Nkulunkulu ongacacile enimthandayo, akekho nhlobo. Isizathu esenza ukuba ngisho lokhu ngesiqiniseko ukuthi nikude kakhulu noNkulunkulu weqiniso. Isizathu sokuthi nibe nokwethembeka suvela ebukhoneni besithixo phakathi ezinhliziyweni zenu, kodwa ngokwami, uNkulunkulu obonakala engemkhulu futhi engemncane emehlweni enu, konke enikwenzayo ukungemukela ngamazwi. Lapho ngikhuluma ngebanga lenu enikude ngalo kuNkulunkulu, ngikhuluma ngokuthi nikude kangakanani noNkulunkulu weqiniso, lapho lo Nkulunkulu ongacacile kusengathi useduze kakhulu. Uma ngithi “ongemkhulu” kumayelana nokuthi uNkulunkulu enikholwa Kuye manje ubonakala engumuntu nje ongenawo amakhono amakhulu; umuntu ongaphakeme kakhulu. Futhi uma ngithi “ongemncane,” lokhu kusho ukuthi nakuba lo muntu engeke abize umoya futhi akhuze imvula, nokho uyakwazi ukubiza uMoya kaNkulunkulu ukuba wenze umsebenzi onyakazisa amazulu nomhlaba, kanjalo ashiye umuntu ekhexile. Ngaphandle, nonke nibukeka ningabamlalelayo impela lo Kristu osemhlabeni, nokho empeleni anikholwa Kuye futhi animthandi. Engikushoyo ukuthi okunguyena enikholwa kuye ngeqiniso yilo Nkulunkulu ongaqondakali osemizweni yenu, futhi okunguyena enimthanda ngeqiniso uNkulunkulu enimlangazelelayo ubusuku nemini, nakuba ningakaze nimbone ngqo. Mayelana nalo Kristu, ukukholwa kwenu kuyingxenyana, futhi uthando lwenu Kuye luyize. Inkolo isho ukukholwa kanye nethemba; uthando lusho indumiso nokuncoma enhliziyweni, akuhlukani. Nokho ukukholwa nothando kuKristu wanamuhla kusele kakhulu kulokhu. Uma kuza ekukholweni, nikholwa kanjani Kuye? Uma kuza othandweni, nithanda kanjani? Aniqondi lutho ngesimo Sakhe, ingasaphathwa eyengqikithi Yakhe, ngakho nikholwa Kuye kanjani? Likuphi iqiniso lokukholwa kwenu Kuye? Nimthanda kanjani? Liphi iqiniso lothando lwenu Kuye?
Baningi abangilandelile ngaphandle kokungabaza kuze kube namuhla, futhi kule minyaka embalwa, nonke nibe nokukhathala. Ngisiqondisise ngokuphelele isimo semvelo kanye nemikhuba yenu ngamunye, futhi kbe nzima kakhulu ukusebenzisana nani. Okudabukisayo ukuthi nakuba ngithole ulwazi oluningi ngani, aninakuqonda nokuncane Ngami. Yingakho abantu bethi naluthwa umuntu ngomzuzu wokudideka. Ngempela, aniqondi lutho ngesimo Sami, ingasaphathwa eyokuqonda okusemqondweni Wami. Manje ukungaqondi ngokuyikho kwenu Ngami kuyakhula, futhi ukukholwa kwenu Kimi kuhlala kuwukukholwa okudidekile. Kunokuba kuthiwe niyakholwa Kimi, kungafaneleka kakhulu ukuthi kuthiwe nonke nizama ukuncenga umusa Wami futhi niyangibungaza nizenza bahle Kimi. Izinhloso zenu zilula—noma ubani ongangivuza, ngizomlandela, noma ubani ongangenza ngiphunyuke ezinhlekeleleni ezinkulu, ngiyomkholwa, kungaba uNkulunkulu noma imuphi uNkulunkulu othile. Akukho kulokhu okungikhathazayo. Baningi abantu abanje phakathi kwenu, futhi lesi simo sibucayi kakhulu. Uma ngolunye usuku, kungenziwa isivivinyo sokubona ukuthi bangaki phakathi kwenu abakholwa kuKristu ngoba ninokuqonda ngengqikithi Yakhe, ngiyesaba ukuthi akekho kini oyokwazi ukwenza lokhu engikufisayo. Ngakho ngeke kunilimaze ukucabanga lo mbuzo: UNkulunkulu enikholwa Kuye uhluke kakhulu Kimi, ngakho uma kunjalo, iyini ingqikithi yokukholwa kwenu kuNkulunkulu? Ngesikhathi nikholwa kakhulu kulowo enimbiza ngoNkulunkulu, kungesikhathi nideda kakhulu Kimi-ke umthombo wale ndaba? Ngiqinisekile ukuthi akekho noyedwa kini owake wacabanga ngale ndaba, kodwa ubunzima bale ndaba sebuke bakukhanyela nje? Nike nacabanga ngemiphumela yokuqhubeka nalolu hlobo lokukholwa?
Ngibabonga kakhulu labo abangenazinsolo ngabanye futhi ngithanda kakhulu nalabo abasheshayo ukwemukela iqiniso; kulolu hlobo olubili lwabantu ngibonisa ukunakekela okukhulu, ngokuba emehlweni ami bangabantu abaneqiniso. Uma unenkohliso kakhulu, uyoba nenhliziyo eqaphile nemicabango yokusola ngezindaba zonke kanye nabantu bonke. Ngalesi sizathu, ukukholwa kwakho Kimi kwakhelwe esisekelweni sokusola. Ukholo olunje yilolu engingasoze ngalwemukela. Ngokweswela ukukholwa kweqiniso, uyoqheka kakhudlwana othandweni lwangempela. Futhi uma ukwazi ukungabaza uNkulunkulu uzicabangela Ngaye ngokuthanda, ngaphandle kokungabaza-ke ungumkhohlisi omkhulu kakhulu kubantu. Uyacabangela ukuthi ingabe uNkulunkulu angafana yini nomuntu: unesono ngokungaxoleleki, unesimilo esinobungqonjwana, awunabo ubuqotho nengqondo, weswele umqondo wobulungiswa, uthanda amasu anesihluku, ukukhohlisa, nobuqili, nokuthokoziswa ububi nobumnyama, kanye nokunye. Isizathu sokuba umuntu abe nemicabango enje akungenxa yokuthi umuntu akanalwazi noluncane ngoNkulunkulu? Uhlobo olunje lokukholwa aluhlukile esonweni! Ngaphezu kwalokho, kukhona ngisho nalabo abakholwa ukuthi labo abangijabulisayo abayilutho ngaphandle kwabazenzisi namakhothangqoko, nokuthi labo abantula la makhono abemukelekile futhi bayolahlekelwa yindawo yabo endlini kaNkulunkulu. Yilolu ulwazi olufundile kule minyaka eminingi? Ingabe ilokhu okuzuzile? Futhi ulwazi lwenu Ngami alugcini kuphela kulokhu kungaqondisisi; okubi kakhulu ukuhlambalaza kwenu uMoya kaNkulunkulu kanye nokungcolisa iZulu. Yingakho ngithi ukukholwa kwalolu hlobo olufana nolwenu luzonenza niqhele kakhulu Kimi futhi bese nimelana kakhulu Nami. Eminyakeni eminingi yomsebenzi, nibone amaqiniso amaningi, kodwa niyazi ukuthi izindlebe Zami zizweni? Bangaki kini abazimisele ukwamukela iqiniso? Nonke nikholwa ukuthi nizimisele ukukhokha intengo yeqiniso, kepha bangaki ngempela abake bahlupheka ngempela ngenxa yeqiniso? Konke okukhona ezinhiziyweni zenu ububi, futhi yingakho nikholwa ukuthi noma ubani, akunandaba ukuthi angaba ubani, unenkohliso nobugwegwe. Niyakholwa ngisho ukuthi uNkulunkulu othathe isimo somuntu angaba njengomuntu ojwayelekile, uyobe engenayo inhliziyo enomusa kanye nothando olunomusa. Ngaphezu kwalokho, nikholwa ukuthi ukuziphatha okuhle nesihe, nemvelo enomusa kukhona kuphela kuNkulunkulu osezulwini. Futhi nikholwa ukuthi ongcwele onje akekho, nokuthi ubumnyama nobubi kuphela okubusa emhlabeni, lapho uNkulunkulu eyinto umuntu abeka kuyo ukulangazelela kwakhe okulungile nokuhle, isithombe esiyinganekwane esenziwe ngumuntu. Emiqondweni yenu, uNkulunkulu osezulwini uqotho, ulungile, futhi mkhulu, ufanele ukudunyiswa nokuthandwa, kodwa lo Nkulunkulu osemhlabeni uyisibambiso nje futhi usetshenziswa uNkulunkulu osezulwini. Nikholwa ukuthi lo Nkulunkulu ngeke alingane noNkulunkulu osezulwini, ingasaphathwa eyokuthi kukhulunywe ngabo bobabili ongathi basezingeni elifanayo. Uma kukhulunywa ngobukhulu nangodumo lukaNkulunkulu, kungokukaNkulunkulu osezulwini, kodwa uma kukhulunywa ngemvelo nenkohlakalo yomuntu, kuyizici uNkulunkulu osemhlabeni oneqhaza kuzo. UNkulunkulu osezulwini uphakeme naphakade, lapho uNkulunkulu osemhlabeni engabalulekile, ebuthakathaka, engenamandla naphakade. UNkulunkulu osezulwini akasiye owemizwa, ukulunga kuphela, lapho uNkulunkulu osemhlabeni enezinhloso zobugovu kuphela futhiakanabulungiswa futhi akanangqondo. UNkulunkulu osezulwini akanabo nobuncane ubugwegwe futhi uthembekile ikuze kube phakade, kulapho uNkulunkulu osemhlabeni unengxenye yokungethembeki njalo. UNkulunkulu osezulwini uthanda umuntu kakhulu, lapho uNkulunkulu osemhlabeni unakekela umuntu ngokungagculisi, kokunye angamnaki nhlobo. Lolu lwazi oluyiphutha kade lugcinwe ezinhliziyweni zenu futhi lungabhebhethekiswa esikhathini esizayo. Nibheka zonke izenzo zikaKristu nizithathela ephuzwini lokungalungi futhi nicubungule wonke umsebenzi Wakhe, ubunjalo nengqikithi Yakhe ngeso lababi. Nenze iphutha elinzima ngokwenza okungakaze kwenziwe abeze ngaphambili kwenu. Okungukuthi, nikhonza kuphela uNkulunkulu ophakeme osezulwini, onomqhele ekhanda lakhe futhi anikaze nimnake uNkulunkulu enimthathela phansi njengongabalulekile ngendlela yokuthi akabonakali kini. Ingabe akusona yini isono senu lesi? Ingabe akusona yini isibonelo esijwayelekile secala lenu lokumelana nesimo sikaNkulunkulu? Niyamkhonza impela uNkulunkulu osezulwini. Niyayidumisa impela imifanekiso ephakeme futhi nazise kakhulu labo abagqame ngobugagu bokukhuluma. Niyayalwa ngokuthokoza nguNkulunkulu ogcwalisa izandla zenu ngengcebo, futhi niyamlangazelela kakhulu uNkulunkulu ongagcwalisa konke ukulangazelela kwenu. Okunguyena yedwa eningamdumisi yilo Nkulunkulu ongaphakeme: into eyodwa eniyizondayo ukuxhumana nalo Nkulunkulu okungekho muntu omhlonisphayo. Into eyodwa eningazimisele ukuyenza, ukukhonza uNkulunkulu ongakaze aninike neyodwa indibilishi, futhi oyedwa kuphela ongakwazi ukunenza nimlangazelele, yilo Nkulunkulu ongathandeki. Lolu hlobo lukaNkulunkulu ngeke lunenze ukuba nikhulise impelamehlo yenu, nizizwe sengathi nithole ingcebo, ingasaphathwa eyokufeza lokho enikufisayo. Kungani-ke, nimlandela?
Nike nayicabanga imbuzo efana nale? Lokhu enikwenzayo akumcasuli lo Kristu nje kuphela, okubalulekile kakhulu, ukuthi kucasula uNkulunkulu osezulwini. Lokhu akuyona, ngiyacabanga, injongo yokukholwa kwenu kuNkulunkulu! Nilangazelela kakhulu ukuba uNkulunkulu athokoze ngani, kepha nikude kakhulu noNkulunkulu. Kwenzakalani la? Namukela kuphela amazwi Akhe, kepha hhayi ukunisebenza noma nokuthena Kwakhe, ingasaphathwa eyokwazi kwenu ukwamukela ukuhlela konke Kwakhe, ukuba nokukholwa okuphelele Kuye. Ingabe, ngempela, ikuphi inkinga lapha? Ekugcineni, ukukholwa kwenu kuyigobongo leqanda elingasoze lakhipha itshwele. Ngokuba ukukholwa kwenu akunilethelanga iqiniso noma kunizuzele ukuphila, kodwa kuna lokho kunilethele umuzwa oyinkohliso wethemba nokwesekwa. Injongo Yenu ngokukholwa kuNkulunkulu yileli themba nomuzwa wokwesekwa kuneqiniso nokuphila. Ngakho-ke, Ngithi umgudu wokholo lwenu kuNkulunkulu awulutho ngaphandle nje kokuzincengela umusa kaNkulunkulu ngokuzenzisa nokungabi namahloni, futhi angeke kuze kuthathwe njengokukholwa kweqiniso. Lingavela kanjani itshwele ekukholweni okufana nalokhu? Ngamanye amazwi, isiphi isithelo esingavezwa yilolu hlobo lokukholwa? Injongo yokukholwa kwenu kuNkulunkulu ngukusebenzisa uNkulunkulu ukufeza izinhloso zenu. Ingabe lokhu akukhombisi iqiniso elibonisa icala esimweni sikaNkulunkulu? Nikholwa ebukhoneni bukaNkulunkulu osezulwini kodwa niphike uNkulunkulu osemhlabeni. Nokho, angiyivumi imibono yenu. Ngincoma kuphela labo bantu abathobekile futhi abakhonza uNkulunkulu osemhlabeni, hhayi labo abangamemukeli uKristu osemhlabeni. Noma ngabe laba bantu bathembeke kanjani kuNkulunkulu osezulwini, ekugcineni, ngeke baphunyuke esandleni Sami esijezisa ababi. Laba bantu bangababi; bangababi abaphikisa uNkulunkulu futhi abangakaze balalele uKristu ngentokozo. Kunjalo, inani labo lifaka nabo bonke abangazi, futhi abangamvumi uKristu. Ingabe ukholwa ukuthi ungenza ngendlela oyithandayo kuKristu uma nje usathembekile kuNkulunkulu osezulwini? Akunjalo! Ukungazi kwakho ngoKristu kuwukungazi ngoNkulunkulu wasezulwini futhi. Noma ngabe uthembeke kangakanani kuNkulunkulu osezulwini, kungamazwi ayize nokuzenzisa, ngokuba uNkulunkulu osemhlabeni akabalulekile kuphela ekutheni umuntu athole iqiniso kanye nolwazi olujulile, kodwa ubalulekile nakakhulu ekujeziseni umuntu emva kwalokho nokubamba amaqiniso okujezisa ababi. Ingabe uyayiqonda imiphumela ezuzisayo nelimazayo lapha? Ingabe usudlulile kukho? Nginifisela ukuthi niliqonde leli qiniso ngolunye usuku oluseduze: Ukuze nazi uNkulunkulu, akumele nazi uNkulunkulu osezulwini kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, uNkulunkulu osemhlabeni. Ningadideki ngalokho okusemqoka noma nivumele okungaphansi kwedlule okumqoka. Kungale ndlela kuphela lapho ungakwazi khona ukwakha ngeqiniso ubudlelwano obuhle noNkulunkulu, nokusondela kuNkulunkulu, futhi ulethe inhliziyo yakho eduze Kwakhe. Uma ubungowenkolo iminyaka eminingi futhi sesiside isikhathi uhlobene Nami, kepha uhlala uqhelile Kimi, Ngithi kungenxa yokuthi ujwayele ukucasula isimo sikaNkulunkulu, futhi isiphetho sakho kuyoba nzima ukubhekana naso. Uma le minyaka eminingi yokuhlobana Nami ingehlulekanga kuphela ukukuguqulela kumuntu onobuntu neqiniso, kunalokho, yagxilisa izindlela zobubi bakho emvelweni yakho, futhi awunamibono yobukhulu ephindwe kabili kunakuqala kodwa ukungangiqondisisi kwakho knakho kuphindaphindiwe, ngendlela yokuthi uze ungithathe njengomngane wakho omncane, Ngithi-ke ukuhlupheka kwakho akusekuncane nje kodwa sekungene nasemathanjeni akho uqobo. Konke okusele ukuthi ulinde ukuba kwenziwe amalungiselelo omngcwabo wakho! Awudingi ukungincenga ngaleso sikhathi ukuthi Ngibe uNkulunkulu wakho, ngoba wenze isono esifanelwe ukufa, isono esingenakuthethelelwa. Noma ngabe bengingaba nomusa kuwe, uNkulunkulu osezulwini uzophikelela nokuthatha impilo yakho, ngenxa yokuthi icala lakho esimweni sikaNkulunkulu aliyona inkinga ejwayelekile, kodwa olohlobo olunzima kakhulu. Uma sesifika isikhathi, ungangisoli ngokuthi angikutshelanga ngaphambili. Konke kubuyela ekuthini: uma uhlobene noKristu—uNkulunkulu osemhlabeni—njengomuntu ojwayelekile, okungukuthi, uma ukholwa ukuthi lo Nkulunkulu akalutho kodwa ngumuntu nje, yilapho-ke uyobhubha khona. Lesi yisexwayiso esisodwa Sami kini nonke.